MW CMC Oo Furay Shirka Golaha Amaanka - Cakaara News
MW CMC Oo Furay Shirka Golaha Amaanka
Diridhaba(CN) Isniin, 1 febuary 2016, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa saaka furay shirka xiliilaha ah ee golaha amaanka ee deegaanka oo kadhacay hoolka shirarka ee huteelka Samrat ee magaalada diridhaba.
Shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay dhamaan mas’uuliyiinta hay’adaha amaanka oo ay kamid yihiin: janaralka ciidanka difaaca qaranka qaybta koonfur bari mudane janaraal Abraham woldemariam, hogaanka nabadgelyada maamulka iyo cadaalada DDSI mudane Yaasiin Cabdi Waris, janaraalka guud ee ciidanka gaarka ah mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Buraale, gudoomiyeyaasha gobolada, hogaamada nabadgelyada heer gobol iyo mas'uuliyiinta kifladoorada.
Hadaba furitaankii shirkan ayuu madaxwaynuhu usheegay mas’uuliyiinta heerarka kaladuwan inay warbixinta dhanka nabadgelyada ay si kooban usoo dhigaan kadibna la isla eegi doono xaalada guud ee amaanka deegaanka iyo heerka uu marayo maanta.
Waxaana sidaa kubilaabatay soo jeedintii warbixinta iyadoo dhamaan ay hay’adaha amnigu warbixinadiina halkaa kasoo jeediyeen sida: ciidanka difaaca qaranka, ciidanka gaarka ah gaar ahaan kuwii kusugnaa xuduudaha, ciidanka federal booliska, ciidanka booliska ee nabadgelyada magaalooyinka deegaanka iyo waliba warbixinta ciidanka gaarka ah ee kusugan wadanka soomaaliya.
Sidoo kale, waxaa shirkan lagu eegay xaalada nabadgelyada xuduudaha dalkeena itoobiya. Waxaana la isla qaatay in 100% ay xaalada nabadgelyada dalka iyo deegaankuba taam tahay. balse, Si loo sii xoojiyo amniga xuduudaha in ciidanka gaarka ah ee deegaanka iyo ciidanka qaranka oo iskudhafan ladajiyo xuduudaha dalka.
kadib, soo jeedintii warbixinada iyo qiimayntoodii ayuu shirkii golaha amaanka ee xiliilaha ahaa madaxwaynuhu sidaa kusoo xidhay.